Biby nify azo alefa, fonosana fampidirana nify - Vayu
Fampisehoana an'ny orinasa
Omeo hatrany ny vahaolana iray-Stop-Solution
SHANGHAI JPS DENTAL CO., LTD dia mamatsy vokatra nify amin'ireo mpanjifa avy amin'ny firenena sy faritra 80 mahery. Ny vokatra nify lehibe anay dia ny fitaovan'ny nify toy ny simulation nify, ny seza nitaingina seza, ny unit nify azo entina, ny compressor tsy misy solika ary ny autoclave sns. Ary ny fanary nify toy ny kitapo implant, bib nify, taratasy crepe, sns.
Ny CE sy ISO13485 anay dia navoakan'ny TUV, Alemana.
NY BUSINESS azonao antoka MPITAROTRA AO CHINA
Seza nify JPSF600
Compresseur rivotra tsy misy solika
JPS Dental dia manome vokatra azo itokisana sy vahaolana tokana ho an'ny mpanjifa rehetra.
izahay hanome antoka anao hahazo foana
Manakaiky ny 20 taona eo amin'ny sehatry ny nify sy ny fitsaboana
ISO 13485 voamarina ary mihoatra ny 60 ny vokatra manana CE
Manankarena amin'ny varotra amin'ny governemanta
Vahaolana iray ajanona amin'ny fividianana feno
farany fanadihadiana tranga
Simulator fampianarana nify avo lenta ho an'ny fampiofanana amin'ny nify
inona miteny ny olona
Nilaza ny mpanjifa anglisy:
JPS Group, mpivarotra atokisanay indrindra amin'ny famatsian-taratasy. Faly izahay amin'ny kalitaon'ny serivisinao ary mankasitraka ny fandraisan'ny JPS andraikitra sy ny matihanina amin'ny asa aman-draharaha. Ny JPS dia azo itokisana ary noho io, vitantsika ny mitazona ny mpanjifanay ho afa-po. Izahay dia hiandrandra fifandraisana tsara izay mbola mitohy.
Nilaza ny mpanjifa soedoà:
Tao anatin'ny valanaretina valanaretina pesta dia nahakivy ny firenena ny fahasosorana sy ny fikorontanana noho ny tsy fahampian'ny fitaovana fiarovana manokana. Niakatra ny JPS ary natolotra tamin'ny fomba mazava sy tsara kalitao. Tamin'ny fotoana toa tsy afaka namboarina ny zava-drehetra dia nataon'ny JPS izany. Ho anay dia mpiara-miasa amin'ny fiainana mandrakizay ny JPS!
Hatramin'ny nananganana azy 11 taona lasa izay, ny JPS Dental dia nanolo-tena hanome ny mpanjifa ONE STOP SOLUTION vokatra azo antoka izay nahazo laza malaza eo amin'ny sehatry ny nify ary nahazo fahatokisana sarobidy avy amin'ny mpanjifa manerantany.